Chrome ကို google | November 2019
MacOS များအတွက်အကောင်းဆုံး torrent client များ
အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှု November 18,2019
အဓိက Chrome ကို google
Chrome ကို google
အဘယ်သို့ငါက Google Chrome မှာတဲ့ pop-ups enable ပါဘူး
ယင်း၏လက်နက်တိုက်အတွင်းလုံခြုံရေးအတွက်အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတွေအများကြီးနှင့်တစ်ဦးအဆင်ပြေကို web surfing ရှိပါတယ်တဲ့အစွမ်းထက် web browser ကို - Google Chrome က။ အထူးသဖြင့်, built-in Google Chrome ကို tools များသငျသညျ Pop-up windows ပိတ်ဆို့ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့လျှင်သင်ရုံနေဆဲသူတို့ကိုဖော်ပြရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်?
UBlock မူလအစ: Google Chrome ကို browser အတွက် Adblock
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အွန်လိုင်းကြော်ငြာကကြော်ငြာအနည်းဆုံးတစ်ဦးအလယ်အလတ်ငွေပမာဏသျောသော web-based အရင်းအမြစ်, ရှာတွေ့အတော်လေးခက်ခဲဖြစ်လာသည်ကြောင်းဤမျှလောက်များစွာသောကွာရှင်းခဲ့သည်။ သငျသညျကို Google က Chrome browser ကိုအဘို့အနှောင့်အယှက်ကြော်ငြာတွေ uBlock မူလအစ extension ကိုငြီးငွေ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အလွန်အသုံးဝင်စေနိုင်ပါတယ်။ uBlock မူလအစသငျသညျကို web surfing ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်, ကြော်ငြာများအမျိုးအစားအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ဖို့ခွင့်ပြု Google Chrome ကို browser ကိုတစ်ခု extension တခုဖြစ်တယ်။
Yandex မှ Google Chrome ကိုမှအမြင်အာရုံ bookmarks ကို: တပ်ဆင်ခနှင့် configuration
Bookmarks - ဆိုက်အလျင်အမြန် access ကိုခွင့်ပြုဦးချင်းစီကို browser များအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ အလှည့်များတွင်အမြင်အာရုံ bookmarks ကို - Google Chrome ကိုတစ်ဦးအလွတ်စာမျက်နှာအသွင်ပြောင်းဖို့ထိရောက်သော tool တစ်ခုဖြစ်သည်ကိုလည်းအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်စာမျက်နှာများကိုစုစည်းဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီနေ့ကုမ္ပဏီ Yandex ကနေအမြင်အာရုံ tabs များမှာပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်ယူပါ။
Google Chrome ကိုအတွက် cookies တွေကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
သိသိသာသာကို web surfing များ၏အရည်အသွေးတိုးတက်စေနိုငျသောအလွန်ကြီးစွာသောအထောက်အ tool ကို, ဒါပေမယ့်ကံမကောင်း, ဒေတာဖိုင်များ၏အလွန်အကျွံစုဆောင်းခြင်းမကြာခဏ Google Chrome ကို browser ကိုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လျော့နည်းစေပါတယ် - ကွတ်ကီးဖြစ်ကြသည်။ ယင်း၏ဟောင်းတဦးစွမ်းဆောင်ရည် browser ကိုပြန်သွားဖို့ဒီကွန်နက်ရှင်အတွက်, သင်ရုံ Google Chrome ကိုအတွက် cookies တွေကိုရှင်းလင်း။
Google က Chrome အတွက် ZenMate: ပိတ်ဆို့က်ဘ်ဆိုက်များမှချက်ချင်း access ကို
သငျသညျအစဉျအမွဲအစဉ်အဆက်သင်၏အကြိုက်ဆုံး site ကို site ကို dial နှင့် Access ၏ငြင်းပယ်ရင်ဆိုင်ရရှိသည်, အဖြစ် သယံဇာတသော့ခတ်ခဲ့သလဲ သင့်ရဲ့အဖြေကို "Yes" ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်လျှင်, သင်ဆက်ဆက်က Google Chrome အတွက်နေရာလေးကို Browser-ZenMate extension ကိုကြွလာတော်မူပါလိမ့်မယ်။ ZenMate - သင့်ကိုမှန်ကန်အိုင်ပီ-လိပ်စာများကိုဖုံးကွယ်ထားရန်အကြီးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်တယ်, ဒါသင်ပိတ်ဆို့ site ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်, သူတို့ကအလုပ်၏နေရာသို့မဟုတ်သူတို့ကိုရန်လက်လှမ်းမှာသင်၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပိတ်ဆို့ပြီရှိမရှိနေပါစေတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Google က Chrome အတွက်ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘော: သော့ခလောက်ကျော်လွှားဖို့ရိုးရှင်းတဲ့လမ်း
ကံမကောင်းစွာပဲ, များစွာသောလူကြိုက်များသည်အင်တာနက်အရင်းအမြစ်များကိုများသောအားဖြင့်ကြောင့်အခွင့်အရေးကိုကိုင်ဆောင်သူတစ်ဦးကိုချိုးဖောက်ရန်, တစ်သက်တာသော့ခတ်ရှုံးရလိမ့်မည်။ သငျသညျဤအ alignment ကိုဆန့်ကျင်ခြင်း, နေတုန်းပဲသင်အကြိုက်ဆုံးက်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်ချင်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သငျသညျနေရာလေးကို VPN ကို-တိကျတဲ့ထို့အပြင်ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘောများတွင်လာပါလိမ့်မယ်။ ဖရီးဂိတ်စစ်သင်္ဘော - သင်က proxy server ကိုချိတ်ဆက်နေဖြင့်ပိတ်ဆို့က်ဘ်ဆိုက်များဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြု Google Chrome ကို browser ကိုများအတွက်ရေပန်းစား proxy ကို extension တခုဖြစ်တယ်။
Google Chrome ကိုအတွက် home page ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
တိုင်းကို Google က Chrome browser ကို, အသုံးပြုသူသည်အလိုအလျောက်ယခင်ကဖွင့်လှစ်စာမကျြနှာကို download လုပ်ပါနောက် startup display ကိုတိကျတဲ့စာမျက်နှာများရှိမရှိသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ Google Chrome ကိုမျက်နှာပြင် browser ကိုဖွင့် home page ကိုဖွင့်လှစ် start လျှင်, အောက်ပါအချက်များကိုကျနော်တို့ကဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်မှာကြည့်ရှုမည်။
သငျသညျဂီတကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြု Google က Chrome အတွက် extensions,
အင်တာနက် - အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များနှင့်ဖိုင်တွေရဲ့စပါးကျီ။ သင်ကြိုက်တယ်အင်တာနက်ဂီတဖိုင်ပေါ်တွင်တွေ့ပြီဆိုပါကအမြဲတမ်းသင့်ကွန်ပျူတာကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောင့်သေချာပေါက်အဆက်မပြတ်, အွန်လိုင်းနားမထောင်ပါဘူး။ ဤဆောင်းပါး၌အကြှနျုပျတို့သညျကိုသင့်ကွန်ပျူတာကိုအင်တာနက်ကနေဂီတကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြု Google Chrome ကို browser အတွက် extension များအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။
Google Chrome ထဲမှာ hidden settings ကို
Google Chrome က - သူ့ရဲ့အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်ဒဏ်ငွေ-tuning အဘို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့အစွမ်းထက်နှင့် functional web browser ကို။ သို့သော်အားလုံးအသုံးပြုသူများကရှိနေတုန်းပဲဝှက်ထားနှင့်ပေါ်မှာ setting များနှင့်ဆောင်းပါးကိုသွားနေကြပါတယ်ကြောင့် "Settings" ကိုခုနှစ်, browser ကိုတိုးတက်စေရန်လုပ်ဆောင်နေများအတွက် tools များသာသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းမသိ။
လုံးဝသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ Google Chrome ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
မည်သည့်အစီအစဉ်အတွက်မလိုအပ်လည်းမရှိသည့်အခါကကွန်ပျူတာပေါ်မှာစွန့်ခွာပြီးရိုးရှင်းဖယ်ရှားရန်ဖြစ်စဉ်ကိုဖျော်ဖြေဖို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်ကစနစ်အတွက်ပဋိပက္ခများကိုဦးတည်သွားစေနိုင်သည်ဟုဖိုင်တွေမတည်မနေပါဘူးဒါကြောင့်ဒါဟာလုံးဝအစီအစဉ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ Google Chrome ကို browser ကိုကြောင်းကိုအလွန်ရေပန်းစားသည်။
Google က Chrome မှာ cookies များကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လို
ကွတ်ကီး - တစ်အသုံးဝင်သော tool ကိုမဆိုကို browser, ဆိုက်ဖို့လာမယ့်ဝင်ပေါက် re-ဝင် login နဲ့ password ကိုမဟုတျပါဘူးခွင့်ပြုထားများနှင့်ချက်ချင်းပရိုဖိုင်းစာမျက်နှာသို့ပြန်ညွှန်းပေးပါလိမ့်ထားတဲ့ Google Chrome ကို, အပါအဝငျ။ အခါတိုင်းသင် "Exit ကို" ကိုနှိပ်ကြဘူးလျှင်ပင်ထို site မှ re-အကောင်အထည်ဖော်ဝင်ဝရန်ရှိသည်ဆိုပါကသင့် browser cookies တွေကိုမသန်စွမ်းသူဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။
အဘယ်မှာရှိ Google Chrome ကိုအတွက် extension များဖြစ်ကြသည်
Google Chrome ကဝေးနေဖြင့်လူကြိုက်အများဆုံး web browser ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤ (add-ons) extension များ၏ (ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ဆုံးထောက်ခံမှုကြောင့်၎င်း၏ Cross-platform, Multi-function ကိုအာဏာဆက်တင်နှင့်စိတ်ကြိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်။ ကိုယ့်အဆုံးစွန်သောတည်ရှိသည်နှင့်ဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာအကြောင်းကို။
Google က Chrome မှာချွတ်ယွင်း Flash Player ကို၏အကြောင်းတရားများ
အဓိကအားဖြင့်၎င်း၏ကျယ်ပြန့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကြောင့် Google Chrome ကို web browser ကို၏လျင်မြန်စွာပြန့်ပွားနှင့်အဆင့်မြင့်နှင့်ပင်စမ်းသပ်အပါအဝင်အားလုံးခေတ်သစ်အင်တာနက်ကိုနည်းပညာများ, ထောက်ခံပါတယ်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအပြန်အလှန်အကြောင်းအရာနှင့်အတူအလုပ်အဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာက Web အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုသူများနှင့်ပိုင်ရှင်များတောင်းဆိုသော features တွေ, အဆင့်မြင့်မှာ browser ကိုအကောင်အထည်ဖော်, Adobe Flash မာလ်တီမီဒီယာပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အခြေခံဖန်တီးခဲ့သည်။
ကို Google က Chrome ဘရောက်ဇာပေါ်တွင်စကားဝှက်ထားရန်ကဘယ်လို
တူညီသောအကောင့်မျိုးစုံသည်အသုံးပြုသူများကအသုံးပြုပါကမလိုလားအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်များကြည့်ရှုရာမှကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်သည်သင်၏ web browser ကိုကာကွယ်ပေးချင်တယ်, နှင့်ကွန်ပျူတာ၏အခြားအသုံးပြုသူများ၏အသေးစိတ်လေ့လာမှုကနေအတွင်းသတင်းအချက်အလက်လျှင်ဒါ, အဲဒါကိုအပေါ်စကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားဖို့ဆင်ခြင်တုံတရားဖြစ်ပါတယ်။
Google Chrome ကို browser ၏ဘာသာပြန်ဆိုသူ Installing
တက်ကြွစွာအင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့သူအသုံးပြုသူများမကြာခဏနိုင်ငံခြားဘာသာစကားမှာအကြောင်းအရာနှင့်ဆိုက်ထံသို့လာကြ၏။ ဒါဟာစာသားကိုကော်ပီကူးခြင်းနှင့်အထူးဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ် program တစ်ခုကနေတဆင့်ဘာသာပြန်ဆိုအမြဲအဆင်ပြေမဟုတျပါဘူး, ဒါကြောင့်အကောင်းတစ်ဆုံးဖြတ်ချက်စာမျက်နှာများတွင်အလိုအလျောက်ဘာသာပြန်ချက် enable သို့မဟုတ် browser ကို extensions တွေကို add ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Google Chrome ကိုအတွက်တွန်းအားပေး-အကြောင်းကြားစာကို disable
နှောင့်အယှက်ကြော်ငြာများနှင့် pop-up သတိပေးချက်များကို - active အင်တာနက်အသုံးပြုသူကိုသင်ကွဲပြားခြားနားသောဝဘ်အရင်းအမြစ်များကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာအနည်းဆုံးနှစ်ခုပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏။ သို့သော်နဖူးစည်းစာတန်းကြော်ငြာတွေ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဆန့်ကျင်ပြသပေမယ့်တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်လက်ခံရရှိနှောင့်အယှက်တွန်းအားပေး-သတင်းစကားအပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးနေကြသည်။
ကို Google က Chrome browser ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသော web browser ကို, အဘရောက်ဇာကို Google Chrome နှင့်အတူလိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင် - သင်ညာဘက်ရွေးချယ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Google Chrome ကဘရောက်ဇာကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို, မြန်နှုန်းမြင့်, themes များ၏အသုံးပြုမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူကောင်းတဲ့ interface ကိုများနှင့်အများကြီးပိုပါတယ်။ သင်သည်အခြားဘရောက်ဇာကိုသုံးပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်ကြပါလျှင်၏သင်တန်း, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သစ်ကိုကို interface ကိုအသုံးပြုရရန်လိုအပ်မည်, နှင့် Google Chrome ကဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာစူးစမ်းရန်။
Google က Chrome မှာမီးခိုးရောင်မျက်နှာပြင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
ကံမကောင်းစွာပဲ, ကအတူအလုပ်၏ n-nnom ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်နီးပါးမည်သည့်အစီအစဉ်ကိုစနစ်တကျအလုပ်မစတင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မကြာခဏအကြီးအကျယ်ဝဘ်ဘရောက်ဇာနှင့်အတူနောက်ထပ်အလုပ်ပါဝင်ပါဘူးတဲ့မီးခိုးရောင်မျက်နှာပြင်ကိုပေးနိုင်ပါသည်သော Google Chrome ကို browser ကိုအတူတွေ့ကြုံတတ်၏။ Google Chrome ကို browser ကိုမီးခိုးရောင်မျက်နှာပြင်ပြသသောအခါ, browser ကိုရပ်စဲမှုလင့်များအဖြစ်ဖြည့်စွက်နှိပ်ခြင်းအားမရပါ။
ကို Google က Chrome browser ကိုများအတွက်အသုံးဝင်သော extension များ
Google Chrome ကို browser ကိုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ပေမယ့်တက်တက်ကြွကြွဒီ browser ကိုတိုးချဲ့ဖြန့်ချိခဲ့ကြသူ developer များကသာကြီးမားထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထိုအခါရလဒ်အဖြစ် - အသုံးဝင်သောနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအများကြီးရှိပါတယ်ရသောအကြားကြီးမားတဲ့စတိုးဆိုင် extension များ။ ဒီနေ့သင်ကအသစ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖြည့်စွက်ခြင်း, browser ၏စွမ်းရည်များကိုချဲ့ထွင်နိုင်သည့်နှင့်အတူ Google က Chrome အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး extension များမှာကြည့်ရှုပါ။
Speed ​​Dial: ကို Google က Chrome browser ကိုအကောင်းဆုံး Visual bookmarks ကို
Visual bookmarks ကို - ကအားလုံးကိုအရေးကြီးသောက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်ထိရောက်သောနှင့်ဗေဒနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဧရိယာထဲမှာ Google Chrome ကို browser ကိုများအတွက်အကောင်းဆုံး extensions တွေကိုတစ်ခုမှာ Dial မြန်နှုန်းဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ယနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မည်အကြောင်းကိုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ Speed ​​Dial - နှစ်ပေါင်းများစွာအသစ်တစ်ခု tab မှာပြသခွင့်ပြုအမြင်အာရုံ tabs များနှင့်အတူ Google Chrome ကို browser ကိုစာမျက်နှာတစ်ခုအဆင်ပြေ browser ကို-based extension ကိုသက်သေပြ။
Skype ကို Windows7မှာ autorun ပိတ်ထား
Windows ကို 10 screenshots များယူဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
က MS Word document အတွက် partition
Lenovo က G555 များအတွက်ယာဉ်မောင်းကို install များအတွက်နည်းလမ်းများ
Market က Play
Adobe Flash Player ကို
Daemons Tools များ
Adobe က Lightroom
VPN ကို-ကွန်ယက်ကိုကနေတဆင့်အင်တာနက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့မကြာသေးမီနှစ်များတွင် ပို. ပို. လူကြိုက်များနည်းလမ်းများ။ ဒါဟာသင်အများဆုံး privacy ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အဖြစ်ကို web အရင်းအမြစ်များအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များ, ပံ့ပိုးပေးဘို့ပိတ်ဆို့သွားရောက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကရင်ဆိုင်ရပါစို့, တက windose7ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ VPN ကိုတည်ထောင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေသည်အဘယ်အရာနည်းလမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
အုပ်စုတစု VKontakte စီးပွားရေး Creating
Windows ကိုမေးခွန်းနှင့်အဖြေဂိမ်းပြဿနာများကွန်ယက်နှင့်အင်တာနက်ကိုသတင်းဆောင်းပါးများဗွီဒီယိုနှင့်အသံစကားလုံးExcel ကိုWindows ကိုပိုကောင်းအောင်အရင်ကဆိုရင်များအတွက်မှတ်ချက်စာအုပ်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပွနျလညျထူထောငျလုံခြုံရေး (ဗိုင်းရပ်စ်)Mobile devicesရုံးBrowser များအစီအစဉ်များသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းရေးIOS နှင့် MacOSသံရှာရန်Disk ကိုရေစီးခြင်းSkype ကိုဘလူးတုသ်Archivesစမတ်ဖုန်းအမှားများအသံကမောင်းသူ
https://termotools.com my.termotools.com © Chrome ကို google 2019